Toe Tet Essential • Toe Tet
ပညာသင်တယ်ဆိုတာ ထီပေါက်သလို ဘွားကနည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဇွဲနဲ့ပုံမှန်လေ့လာသွားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီနေ့လို internet ခေတ်မှာ self-learning ကပိုလို့တောင်အရေးကြီးလာပါသေးတယ်။ သာမာန်ပညာရေးက ထမင်းစားဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဘဝတိုးတက်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ကိုယ်တိုင်လေ့လာဖို့လိုပါတယ်။
တကယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီပြီဆို စီးပွါးရေး၊ တိုးတက်ရေး၊ အသုံးချ စိတ်ပညာ၊ Marketing နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ English အောက်ပါသင်တန်းများအားလုံးကို အိတ်သွန်ဖာမှောက် ပေးလိုက်ပါမယ်။ တစ်နှစ် Subscribe လုပ်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
Toe Tet Essentials Plan ကို ဒုတိယနှစ်မှ စတင်ပြီး ယခု Program များအပြင် အသစ် upload လုပ်ပေးမည့် program များကို တစ်နှစ်ကို “မူလဈေး၏ Special Offer 75% OFF” ဖြင့်လေ့လာသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Plan တစ်ခုခုကို တက်ရောက်ရုံဖြင့် အောက်ပါသင်ခန်းစာများ အားလုံးကို လေ့လာခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
Goal Setting & Lasting Motivation (GSM)
Applied Psychology for Business & Marketing (Part 2)
Success with Memory Training (SMT)
NLP 101 (Neuro-Linguistic Programming)
GMC Program (Guerrilla Marketing Coach Certification)
Toe Tet Essentials Plan
U PHYO PAING
ငွေလွှဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ “Choose File မှတဆင့် ငွေလွှဲထားတဲ့ Screen Shoot လေးကို” ထည့်သွင်း၍ ပေးပို့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အကူညီလိုအပ်ပါက 09794461888 သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ (Office Hour: 9:00 AM to 8:00 PM)
Toe Tet Essentials FAQs
၁။ ToeTet Essentials ဆိုတာ?
ToeTet Essentials ဆိုတာကတော့ personal development, psychology, business management, entrepreneurship, marketing နဲ့ English စာ course ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကို တခါတည်းလေ့လာနိုင်မည့် program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နှစ်လေ့လာခွင့် ၁၈၀,၀၀၀ ဖြစ်ပြီး တစ်လကို ၁၅၀၀၀ သာကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်မှ စတင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
၄။ နောက်နှစ်တွေပြန်လေ့လာမယ်ဆို ထပ်သွင်းရမှာလား?
တစ်နှစ်ပြည့်ပြီး နောက်နှစ်တွေမှာ ထပ်လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင် ၂၅% ဖြစ်တဲ့ ၄၅၀၀၀ သာသွင်းပြိး တစ်နှစ်ထပ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အသစ်ဖြည့်ပေးမည့် course တွေပါထပ်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၅။ Certificate ပေးမှာလား?
သင်ခန်းစာတစ်ခုလေ့လာပြီးတိုင်း ဒီသင်ခန်းစာတစ်ခုမှာ လေ့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများကို toetet.platform@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးပါက Digital Certificate ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
၆။ မသိတာမေးစရာရှိတာတွေကို ဘယ်လိုမေးမလဲ?
Video သင်ခန်းစာတိုင်းရဲ့ comment session မှာမေးထားနိုင်ပါတယ်။ ဆရာများမှ တစ်ပတ်တစ်ခါ ပြန်ပေးပါတယ်။
Course အလိုက်သင်ကြားသူများမတူပါဘူး။ Personal Development, Applied Psychology, Business Management နှင့် Marketing ကို Dr. Phyo Paing မှ သင်ကြားပေးထားပြီး English ကိုတော့ ဆရာ Dr. မင်းချစ်ဇော်မှ grammar ကိုသင်ကြားထားပေးပြီး ဆရာ Daniel မှ Secrets to4skills English ကိုသင်ကြားပေးထားပါတယ်။